Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Fursadda 1aad Ee Laheysto Waa Hadalka Ee Ma Qabyaalad Baa Looga Faa’iideysan Mise Qaran? By: Xaaji M/rashiid
Maqaal: Fursadda 1aad Ee Laheysto Waa Hadalka Ee Ma Qabyaalad Baa Looga Faa’iideysan Mise Qaran? By: Xaaji M/rashiid
Posted by ONA Admin	/ November 25, 2018
QEEXIDDA QABIILKA- Waxaa jirta laba masalo oo Soomaalida iskaga qaldamay kuwaasoo kala ah Qabiil iyo Qabyaalad. Sideedaba waxay Diinta islaamku ilaalisay Nasabka oo ah inuu ruux waliba yeesho meel loo raaco. Rabi SXW wuxuu sheegay inuu dadka kadhigay Shucuub iyo Qabiilooyin in la isku aqoonsado darteed. Tusaale Ninbaa gabadh soo doonay waxaa qasab in la waydiiyo Waalidkiisa iyo Qabiilka uu yahayba. Sidoo kale kasoo qaad inaad Dayn u raadsatay dad aan ku aqoonin, waxaa iyana qasab ah inay ku waydiiyaan Qoyskaaga iyo qabiilkaagaba. Wixii intaa dheer waan in la isku xidhiidhiyo sida qaraabada katimaada dhanka Aabaha ama dhanka Hooyada.
QEEXIDDA QABYAALADDA- Qabyaaladu waa eray la qaloociyay oo laga leexiyay meeshuu ku toosnaa wuxuuna dagaal kula jiraa Cadaaladda. Kasoo qaad in laba qabiil oo midi kuxigo ay wax isku qabasadeen, kadibna ay kuu wada yimaadeen adigoo kusugan xafiiskii aad xaakimka ka aheyd. Hadii aad ugar,qaaday waxaa gardarradii yeeshay kuwii ku xigay! Sida Cadaaladu tahay waa inaad qoladaada ciqaabto, balse intaad qabyaaladeysay ayaad kuwii dulmanaa wax walba dusha kasaartay. Hadaba qabyaaladu waa dhaqan aad uliita cidii caado kadhigtana intaan Aakhiro la gaadhin Aduunka ayaa lagu ciqabaa!
Hadaan gudaha usii galo ujeedka Maqaalka,Tan iyo intuu isbadalku kadhacay wadanka itoobiya waxaa soo baxaya in qowmiyadaha kala duwani ay mahad sheeganayaan inkastoo laga yaabo inay dhibaatooyin yar yari meelaha qaarkood kajiraan. Markii dilkii iyo xabsiyadii laga yimaado waxay aad uga cabanayeen dhanka xoriyatu qawlka oo aheyd inuuna shaqsiga wadaniga ahi cabiri karin aragtidiisa dhabta ah, taas lafteeda way ka bogsadeen.
Waxaa jirta in bani’aadamku ka koobanyahay qowmiyado kala duwan iyo luqadao kala jaad ah. Taasi waa sunne Rabaani ah oyna cidna dood kaqabin. Hadaba dadka soomaaliyeed waa hal qowmiyad oo waxbadan wadaagta, waxaase jirta inuu isticmaarkii reer Yurub shan meelood ukala qaybiyay. Nasiib darro waxaa dhanka itoobiya lamariyay Gobolka Soomaaliyeed ee Ogaden la yidhaaho ee sidaa ugu dhigan khariirada Aduunka.
Hadaba Markuu isbadalkan cusubi ka dhacay degaanka soomaalida waxaa la helay fursad qaali ah oon horay ujirin. Waxaa suurto gashay in shacabkii ruux waliba hadli karo dhibaatadii soo gaadhayna sheegan karo, xaqiisana raadsan karo, isla markaana uu cidii dulmiday farta kufiiqi karo. Intaasi waa arin uu xaq uleeyahay, balse waxaa jirta in dadka qaarkii ay damceen inay fursadda uga faa’iideystaan qabyaaladda. War hooy soomaaliyeey intaad waxyaabaha yar yar iska dhaaftaan kafakara sidaad u raadsan laheydeen Xuquuqda wayn ee idinka maqan idinkoo ka faa’iideysanaya fursadda hadalka ee hotriina taala. Furasadda maanta la heysto waa in dadku codkooda mideeyaan ugana faa’iideystaan siday ku gaadhi lahaayeen Qaranimo.
Ugu danbayn- Nasiibka wanaagsan ee ay umadda Gobolku doorkan hayestaan waa Ururka ONLF oo isagu ku raad,jooga Sidii Umadda Soomaalida Ogadenya ay kuheli laheyd xaqeeda oo dhameystiran, wuxuuna mudanyahay in la gacansiiyo.